सैमसंग ग्यालेक्सी S6 समीक्षा: को iPhone हत्यारा - समाचार नियम
आकाशगंगा S6 सबै भन्दा राम्रो स्मार्टफोन सैमसंग कहिल्यै बनाएको छ र यकीनन सबै भन्दा राम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन उपलब्ध छ. अन्ततः उच्च-अन्त प्रतिद्वन्द्वी को शिल्प मेल खाने र देखिन्छ र ठूलो महसुस.
शीर्षक यो लेख “सैमसंग ग्यालेक्सी S6 समीक्षा: को iPhone हत्यारा” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, बिहीबार 23 अप्रिल मा theguardian.com लागि 2015 05.00 UTC
आकाशगंगा S6 सैमसंग देखि नवीनतम प्रमुख एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छ, मिति उत्तम क्यामेरा को एक साथ एक डिजाइन-केन्द्रित सबै-धातु र ग्लास Powerhouse.
यो S6 दुई प्रजातिहरू आउँछ: एक परम्परागत समतल स्मार्टफोन र स्क्रिनमा बाङ्गो किनारा एक, को S6 एज.
गरेको गर्न फलो सैमसंग ग्यालेक्सी S5, धार प्रौद्योगिकी काटन थियो तर एक प्रिमियम डिजाइन र महसूस अभाव जो, को S6 यसको स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको को रुप र महसूस को कोरियाली कम्पनीको reinvention जारी.
यो S6 सैमसंग गरेको अल्फा को सरल डिजाइन र ठोस महसूस लिन्छ र सबै प्लास्टिक ditches, यसको बाहिर खोल लागि एल्यूमीनियम र ग्लास मा केवल परेर.
चिल्लो धातु र ग्लास
ग्लास फिर्ता चिल्लो छ, किनाराको मा र सबै ग्लास पीठ जस्तै घुमेको मिनेट scratching गर्न खतरा छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
बेला एकदम रूपमा आँखा-पक्रने यसको बाङ्गो स्क्रिन संग S6 किनारा रूपमा, मानक S6 सैमसंग लागि जमीन मा एक लाइन निशान: नयाँ उपकरणहरू निर्देशन ड्राइभिङ गर्दा डिजाइन कम्तिमा प्रविधि संग स्तर हुनुपर्छ.
यो S6 प्लास्टिक वा नक्कली छाला फिर्ता खाई गर्न सैमसंग पहिलो स्मार्टफोन हो, एक गोलाकार एल्यूमीनियम समूहले उपकरण छेउमा वरिपरि चलिरहेको संग ग्लास अगाडि र पछाडि बदलिएको.
यो मजबूत बिल्कुल कुनै दिन वा शरीर मा कहीं फ्लेक्स निर्माण गरिएको छ, तर गत वर्ष गरेको ग्यालेक्सी S5 को waterproofing भनेन. ग्लास फिर्ता पनि हल्का scratching गर्न खतरा छ, जो केवल उज्ज्वल प्रकाश देखिने छ.
यो S6 6.8mm बाक्लो छ र 138g वजन, जो यो एप्पल गरेको 6.9mm भन्दा पतली तर भारी बाक्लो बनाउँछ, 132G आईफोन6र अन्य शीर्ष अन्तमा स्मार्टफोन भन्दा पतली, को 7mm बाक्लो S6 किनारा सहित.
यो 5.1in ट्रयाक्टर HD स्क्रिन सबै भन्दा राम्रो को एक स्मार्टफोन गर्न कहिल्यै सज्जित छ: तेज पिन, जीवंत र धनी अश्वेतहरुको र व्यापक हेर्ने कोण संग. आकाशगंगा S5 को 5.1in पूर्ण HD स्क्रिन राम्रो थियो, यो एक एकदम राम्रो छ.
कुल मिलाएर, ग्यालेक्सी S6 छलफल हुन सकेन दोस्रो सर्वोत्तम देख स्मार्टफोन सैमसंग कहिल्यै उत्पादन गरिएको छ, मात्र यसको बाङ्गो स्क्रिन किनारा संस्करण द्वारा कुटपिट, र अन्तमा शिल्प मा HTC र एप्पल मेल खाने.
धातु ब्यान्ड चिल्लो र ठोस छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
पर्दा: 5.1ट्रयाक्टर HD AMOLED मा (577ppi)
प्रोसेसर: octa-कोर सैमसंग Exynos 7420
भण्डारण: 32/64/128जीबी; कुनै SD कार्ड
संचालन प्रणाली: एन्ड्रोइड 5.0.2 Touchwiz संग "ललीपप"
क्यामेरा: 16OIS संग सांसद पछि क्यामेरा, 5सांसद सामने-सामना क्यामेरा
जडान: LTE, वाइफाइ, NFC, वायरलेस चार्ज, ब्लूटूथ 4.0 र जीपीएस
आयाम: 143.4 x 70.5 एक्स 6.8mm
तेज फोन जाँदै
छेउमा भएको नैनो सिम स्लट धारण, तर कुनै microSD कार्ड स्लट उपस्थित. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
आकाशगंगा S6 लाइन पहिलो अमेरिकामा सैमसंग आफ्नै Exynos प्रोसेसर प्रयोग गर्न छ, कोरियाई कम्पनीको स्मार्टफोन को यूएस र बेलायत संस्करण. सामान्यतया Exynos चिप्स मात्र देशहरूमा प्रयोग गरिएका छन् 4G कवरेज बिना, अमेरिकामा Qualcomm गरेको Snapdragon चिप्स favoring, यूएस र बेलायत.
यो octo-कोर Exynos 7420 प्रोसेसर एक साना-ठूला संयोजन मा संयुक्त दुई ट्रयाक्टर-कोर प्रोसेसर छ. एक कम शक्ति 1.5GHz चिप (साना भाग) सबैभन्दा undemanding कार्यहरू र एक अधिक शक्तिशाली कार्य, तर पनि थप शक्ति भोक 2.1GHz चिप (ठूलो भाग) आवश्यक हुँदा लिन्छ.
राम नयाँ चिप र 3GB को S6 सजिलै मिति गर्न सबैभन्दा छिटो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन को एक बनाउन. तर त्यो गति र उच्च-घनत्व स्क्रिन ब्याट्री जीवनको मूल्य आउन.
को S6 किनारा जस्तै, ठूलो 2.1GHz प्रोसेसर अप आगलागी यदि ब्याट्री एक हिट लिन्छ, तर समतल S6 मेरो परीक्षण राम्रो प्रदर्शन. सामान्यतया यो चार्ज गर्न चाहिने अघि एक दिन र आधा पछिल्लो हुनेछ, जो अझै पनि सबै भन्दा राम्रो छैन - सोनी गरेको Xperia Z3 प्रति शुल्क दुई दिन भन्दा रहन्न - तर केही प्रतियोगिहरु भन्दा राम्रो छ.
चार्ज छिटो छ, विशेष गरी USB पावर एडप्टर कि बक्स मा आउछ प्रयोग, धेरै वायरलेस चार्ज स्तर लागि समर्थन सुविधाजनक हुँदा.
Samsung उत्कृष्ट शक्ति बचत मोड राम्रो काम र दिन द्वारा ब्याट्री लाइफ, तर केवल उपयोगिताको त्यागी द्वारा.
फिर्ता खोसिएर नाङ्गै सफ्टवेयर
यो S6 को S6 किनारा रूपमा अनुकूलित Android को नै संस्करण "TouchWiz" भनिन्छ चल्छ, बस केही किनारा-स्क्रिन अनुप्रयोगहरू बिना.
यो एकदम अघिल्लो सैमसंग स्मार्टफोन को सुनिएको संस्करण अधिक सुधार छ, तर सैमसंग गरेको कम भन्दा ठूलो अधिकांश गर्दा अनुप्रयोगहरू गइसकेको हो, तेस्रो पार्टी अनुप्रयोगहरू आफ्नो ठाउँ लिन.
यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, WhatsApp र दूत अनुप्रयोगहरू, प्लस माईक्रोसफ्टका OneDrive, OneNote र स्काइप सबै पूर्व-स्थापित आउन र पूर्णतया हटाउन सकिँदैन तर सुरुवातकर्ताबाट सीधा अक्षम गर्न सकिन्छ.
जबकि TouchWiz अझै रूपमा HTC र सोनी देखि मानक एन्ड्रोइड इन्टरफेस वा प्रयास रूपमा सफा र आकर्षक छैन, यो एक विशाल सुधार सबै दौर कम्पनीको अघिल्लो सफ्टवेयर तुलना गरिएको छ.
क्यामेरा गांठ फिर्ता बाहिर sticks. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सबै भन्दा राम्रो को S6 गरेको 16-मेगापिक्सेल क्यामेरा एक कहिल्यै स्मार्टफोन गर्न लगे र धनी उत्पादन सक्षम, फोटोग्राफर देखि आवश्यक धेरै सानो कौशल संग विस्तृत फोटो. ओप्टिकल छवि स्थिरीकरण बाहिर smooths हात राम्रो जनाए र कम प्रकाश प्रदर्शन ठोस छ.
गृह बटन को एक डबल प्रेस क्यामेरा सुरु, जो यहाँ र अब धेरै सजिलो कब्जा बनाउँछ.
अगाडि-सामना 5-मेगापिक्सेल Selfie क्यामेरा पनि ठूलो छ, फोन को पछाडि हृदय-बिट सेन्सर गर्दा एक फोटो ट्रिगर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
औंठाछाप पाठक संग स्मार्ट लक
औंठाछाप सेन्सर सही छ, छिटो र प्रयोग गर्न सजिलो. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
गृह बटन अन्तर्गत samsung गरेको स्पर्श औंठाछाप सेन्सर अब प्रयोगकर्ताहरु लाई यो भन्दा आफ्नो औँला स्वाइप गर्न आवश्यक छ, र फलस्वरूप प्रयोग गर्न एकदम सही र सजिलो छ.
जब एन्ड्रोइड ललिपप गरेको स्मार्ट लक संग संयुक्त, एक विश्वसनीय ब्लुटुथ उपकरण जडान यदि जो राख्छ को S6 अनलक, यसलाई मा र छरितो फोन बाहिर रही बनाउँछ र खरिद प्रमाणिकरण र यस्तो LastPass रूपमा केही अनुप्रयोग सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
सैमसंग ग्यालेक्सी S6 £ 600 लागत भण्डारण 32GB संग चार रंग र तीन संस्करण एक आउँछ, 64जीबी लागत £ 660 र एक 128GB एक रूपमा अझै घोषणा योगफल लागत.
यो एक microSD कार्ड स्लट अभाव, यो अर्थ को 64GB भण्डारण संस्करण खरीद लायक हुनेछ, र यो पनि दीर्घायु असर गर्नेछ जो एक हटाउन सकिने ब्याट्री छैन.
एक शानदार क्यामेरा, औंठाछाप सेन्सर र वायरलेस सशक्त प्याकेज बाहिर राउन्ड चार्ज. ब्याट्री जीवन राम्रो हुन सक्छ, तर यो कम से कम एक दिन हुनेछ, संभवतः अब आफ्नो उपयोग आधारमा.
धेरै pretenders पछि, Samsung अन्तमा यो उत्पादन गर्न प्रयास गरिसकेका को iPhone हत्यारा छ.
यो S6 र S6 किनारा बीच एक विकल्प छ भने, किनारा को बाङ्गो स्क्रीन थप आँखा-पक्रने हो तर S6 धेरै nicer हातमा महसुस. अलग सानो ब्याट्री मतभेद, जो एक तपाईं राम्रो को नजर मन?
पेशेवरों: छिटो, ठूलो पर्दामा, आकर्षक डिजाइन, राम्रो औंठाछाप पाठक, उत्कृष्ट क्यामेरा, वायरलेस चार्ज
नकारात्मक: कुनै हटाउन सकिने ब्याट्री वा भण्डारण, फेसबुक र Microsoft अनुप्रयोगहरू पोको, फिर्ता ग्लास सजिलै scratched
• Samsung Galaxy S6 एज समीक्षा: खुशी को लागि वक्र, छैन समारोह
• सैमसंग ग्यालेक्सी A5 समीक्षा: उच्च-अन्त लग र महसूस संग एक मध्य-दायरा स्मार्टफोन
• Samsung ग्यालेक्सी नोट एज समीक्षा: बाङ्गो पर्दा एक बांग्लादेश भन्दा बढी छ
Nokia 8110 4जी समीक्षा
एन्ड्रोइड, लेख, ग्याजेटहरू, मोबाइल फोन, समीक्षा, samsung, शमूएल गिब्स, स्मार्टफोन, सफ्टवेयर, प्रविधि
← अघिल्लो पोस्ट स्याउ वाच: 20 तिनीहरूका विकासकर्ताले मा - मूल्य मा लन्च दिन प्रयास अनुप्रयोगहरू’ शब्द →